Uyifaka njani iClockworkMod Ukubuyisela kwi-Samsung Galaxy S 3 | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ukubuyiselwa kwe-Android, Ingcambu Android, Samsung, Tutorials
Kwisifundo esilandelayoNdiza kubafundisa, usebenzisa ivumba 3.7, i ukuba uyenze njani ingcambu kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwiSamsnug Galaxy S 3, okanye ikwaziwa njenge I-GT-i9300.
Ngokwenza oku siya kuba nelungelo lethu lokugcina sebenzisa usetyenziso olufuna amalungelo angaphezulu, kwaye sinokwenza kwakhona backup okanye nandroidbackup yenkqubo yethu iphela, Ukongeza ekubeni nakho i-flash ephekiweyo kunye ne-roms eguqulweyo kwesi sixhobo.
2 Faka abaqhubi abafanelekileyo ngee-KIES
3 Ukukhanya kweClockworkMod Recovery
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khuphela i-Android SDK yeWindows e ukuyifaka kwi-PC yethu.
Siza kukhuphela i-Samsung Kies kwaye siyifake kwikhompyuter yethu.
Nje ukuba zombini izinto zifakwe, Siza kuqalisa kwakhona ikhompyuter kwaye siqhubekele kwinqanaba elilandelayo.
Faka abaqhubi abafanelekileyo ngee-KIES
Siza kuvula I-Samsung KIES kwaye siya kuqhagamshela ifowuni yethu kwikhompyuter ngentambo yayo ye-usb kwaye siya kulinda IIKIES qaphela isixhobo.
Nje ukuba yamkelwe, siya kuvala ii-KIES kwaye siyakususa intambo ye-usb kwi I-Samsung Galaxy s3, Ngoku siza kungena kwifayile ye- imenyu yesethingi yesixhobo kwaye siza kwenza ukuba kungasebenzi ukulungiswa kwe-usb, siya kuyidibanisa kwakhona kwikhompyuter sisebenzisa intambo yayo ye-usb (Kies ivaliwe) kwaye siya kulinda gqibezela ukufaka abaqhubi abaseleyo.
Ukukhanya kweClockworkMod Recovery
Into yokuqala esiza kuyenza yile khuphela i-odin 3.7 kunye I-kernel iguqulwe ngokutsha, zakuba zombini zikhutshiwe iifayile, siya kuthi sizivule kwifolda entsha kwidesktop, kwaye Siza kwenza njengabalawuli ivumba le-3.04:
Ngoku siza kucofa kwiqhosha le-PDA kwaye siya kukhetha ifayile kwifolda I-CF-Root sikhutshelwe ngaphambili, siya kuba nengqwalaselo eyodwa yokuba kwi-odin, ibhokisi yokwahlula-hlula ayihloliswanga, ndiyaphinda I-RE-SEgment AKUFUNEKA IJONGWE.
Ngoku kuya kufuneka siyicime I-Samsung Galaxy s3, uyivule imowudi yokukhuphela, kwaye qhagamshela nge-usb kwikhompyuter.
Siza kulinda i-odin ukuze siyamkele, Siza kwazi ukuba iyifumene, kuba kwibhokisi ephezulu ngasekhohlo, umnxeba ID: COM, ilizwi lizophuma I-COM ilandelwa linani lonke kwimvelaphi etyheli.
Siza kucinezela Qala kwaye siya kulinda inkqubo ukuba igqibe, eya kuthi iphele xa u-odín esibuyisela igama elithi PASS.
Ngeli xesha I-Samsung Galaxy s3 siza kuqala kwakhona kwaye sinokujonga ukusuka idrowa yeapp Njengoko sinayo usetyenziso ezimbini ezintsha ezifakiwe, enye ngu umnxibelelanisi, kwaye enye yile Umphathi weCWM.
Khuphela - I-Odin 3.7, I kernel eguqulweyo, Android SDK, Kies Samsung
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S 3, indlela yokufaka kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwinyathelo elinye
Oku kusebenza kwiGPS S3 kumqhubi we-AT & T.
Ndifumana impazamo xa kuvulwa i-odin
Uyidanyaza njani i-Samsung Galaxy tab 7 "kunye nendlela yokuGweba